"Xayiraad Iyo Ganaax Ayaanu Saaraynaa, Wuu Akhlaaq Xun Yahaye..." Madaxweynaha Barcelona Iyo Arthur Melo Oo Isku Dhacay - Gool24.Net
“Xayiraad Iyo Ganaax Ayaanu Saaraynaa, Wuu Akhlaaq Xun Yahaye…” Madaxweynaha Barcelona Iyo Arthur Melo Oo Isku Dhacay
Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Josep Maria Bartomeu iyo kubbad-sameeyaha naadigaas ee Arthur Melo ayaa si toos ah iskugu dhacay, xilli uu xiddiga reer Brazil diiddan yahay inuu kusoo laabto tababarka.
Arthur Melo ayaa dhabarka u jeediyey Barcelona tan iyo markii uu heshiiska u saxeexay Juventus oo uu dhamaadka xili ciyaareedka tegi doono, iyadoo dhinaca kalena ay Barca lasoo wareegayso Pjanic.
Laacibkan ayaa ka cadhaysan in kooxdu ku riixday inuu Juventus tago oo ay kusoo beddeshaan Pjanic oo da’ ahaan aad uga weyn, isaga oo doonayay inuu sii joogo Camp Nou, hase yeeshee tababare Quique Setien oo kaydka geliyey iyo doonis la’aanta kooxdu u muujisay ayaa waxay keentay inuu diido inuu tababarka kusoo laabto.
Barcelona ayaa isku diyaarinaysa kulanka Champions League ee wareegga 16ka tartanka Champions League ee ay Sabtida ku ballansan yihiin Napoli, waxayna u badan tahay in Arthur aanu qayb ka noqon ciyaartan.
Madaxweyne Josep Maria Bartomeu ayaa si cad u weeraray hab-dhaqanka Arthur, waxaanu sheegay inay tahay astaan akhlaaqad xumo ah oo uu muujinayo, taas oo aan loo dul-qaadin karin, ayna tahay in lagu ciqaabo.
“Maaha wax la aqbali karayo, waa fal anshax xumo sababtoo ah ma jirto sabab cudur-daar u noqon karaysa inuu kusoo laaban waayo kooxdiisa waqtigan anaga oo ciyaarayna Champions League.” Ayuu yidhi Bartomeu.
Arthur ayaa u muuqda in waqtigiisii Barcelona uu dhamaaday oo aanu doonayn inuu kala qayb-galo kulamada Champions League, isla markaana uu kaliya sugayo inta la gaadhayo dhamaadka bishan oo uu si toos ah ugu duuli doono Juventus, halka Barcelona ay heli doonto Miralem Pjanic.